Rosetta @ imba: batsira PC yako kurwisa SARS-CoV-2 | Linux Vakapindwa muropa
Chokwadi iwe wakanzwa nezve grid komputa, uye mapurojekiti akaita seSETI iyo yakatsvaga kutsvaga hupenyu hwevatorwa uchishandisa zviwanikwa zvehardware kubva kune yakawanda michina isina kutambiswa. Kuti uite izvi, zvaive zvakakwana kuisa software pane yako system kuti ukwanise kubatsira kune iwo mapurojekiti. Ndozvazviri Rosetta @ kumba, uye inoenderana neGNU / Linux.
Mune ino kesi, hazvisi zvekutsvaga hupenyu mune zvese zvakasikwa, asi nezve kupa mukutsvagisa. inopesana neSARS-CoV-2 coronavirus. Kana iwe uchida kuita yako diki, iwe haufanire kuve neruzivo rwechinhu chero chipi zvacho, haufanire kunge uri saenzi wayo. Ingokweretesa zviwanikwa kubva kuPC yako kuti zvishandiswe pakutsvaga mhinduro yedenda iri kubudikidza nekupfupikiswa kwemakomputa mazhinji akaunganidzwa kuburikidza neRosetta @ imba, ichigadzira komputa huru ine simba rakakura ...
Rosetta @ imba chirongwa chakapihwa chemakomputa cheBaker rabhoritari yeYunivhesiti yeWashington, uye inomhanya pane yakavhurwa sosi chikuva Berkeley Open Infrastructure yeNetwork Computing (BOINC) iyo yakatanga kugadzirirwa yambotaurwa SETI @ imba yekumwe kutsvaga chirongwa.
1 Zvinodiwa kujoina Rosetta @ kumba
2 Ungatanga sei kutora chikamu?
Zvinodiwa kujoina Rosetta @ kumba
Kuti ubatsire neiyi Rosetta @ epurojekiti yepamba, iwe unofanirwa kungova nechikwata chine vashoma zvinodiwa zvakakosha:
PC kana Raspberry Pi
Iine GNU / Linux, FreeBSD, macOS, kana 64-bit Windows inoshanda sisitimu.
Hardware ine CPU yeinosvika 500 Mhz, 200 MB yemahara disk space uye 512 MB ye RAM.
Ungatanga sei kutora chikamu?
Kutanga kutora chikamu neRosetta @ kumba, zvaunofanirwa kuita kutevedzera izvi nhanho dziri nyore:
Sign up paRosetta @ kumba kune account.
Isa mapakeji anodiwa (boinc-mutengi, boinctui, uye boinc-maneja), yeiyo Rosetta @ imba daemon chikuva, chinongedzo chekusarudza chirongwa uye kugadzira masetingi, uye iyo GUI kana iwe uchida kushandisa graphical nharaunda zvichiteerana.
Vhura BOINC Manager uye sarudza iyo Rosetta @ imba purojekiti kubva kune ese aripo.
Pinda magwaro ako kana wakumbirwa uye uteedzere nhanho ... Uchaona kuti chimiro chiri nyore.
Rangarira kuti iwe unogona kumira kubatana pese paunoda, uye hazvireve kuti zviwanikwa zvako zvinogara zvichitorwa. Vanozongoshandisa ndangariro uye CPU nguva yekuwana komputa simba kana iwe wafunga ...
Mamwe ruzivo nezve chirongwa - BOINC
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Rosetta @ imba: batsira PC yako kurwisa SARS-CoV-2
Linux-yakavakirwa Windows. Zvakare dhongi kune gorosi
Iyo nyowani vhezheni yeMiswe 4.11 inosvika neTor 10, Kernel 5.7.11 uye nezvimwe